Nandritra ilay fetibe afakomaly alina: olona efatra tratran’ny “coma éthylique” | NewsMada
Nandritra ilay fetibe afakomaly alina: olona efatra tratran’ny “coma éthylique”
Ankoatra ireo olona vitsivitsy niakatra tosidra, efatra ny fantatra fa tratran’ny tsy fahatsiarovantena noho ny fisotroan-toaka tafahoatra (coma éthylique) ka naiditra tetsy amin’ny HJRA, taorian’ilay fetibe nanerana ny tanàna, noho ny fandresena azon’ny Barea, afakomaly alina.
Hafaliana, horakoraka, kapoka sarom-bilany, fitsofana kiririoka… Santionany amin’ireo endrika fanehoam-pifaliana taorian’ny fandresena miezinezina azon’ny ekipam-pirenena malagasy, ny Barean’i Madagasikara, nandritra ny lalao ampahavalon-dalana ho fiadiana ny amboaran’ny ”Can” tanterahina any Egypta, afakomaly. Na teo aza anefa izany, fifaliana tsy ialana zava-pisotro misy alikaola ka samy nanao izay ho afany tamin’ny alalan’ny famalifaliana ny tenany (sady tsy nisy bedy rahateo koa) ny tsirairay. Tao anefa ireo tsy nahafehy ny zava-pisotro nosotroiny ka voatery naiditra hopitaly satria tsy nahatsiaro tena vokatry ny fisotroana diso tafahoatra toaka. Vokany, olona efatra no torana tsy mahatsiaro tena naiditra tao amin’ny hopitaly HJRA sampana famelona aina ary mbola manaraka fitsaboana ao hatramin’ny omaly. Nambaran’ny mpitsabo eo anivon’ity sampana famelomana aina ity fa miasa andro aman’alina izy ireo amin’ny fandraisana ireo marary nandritra ity lalao fiadiana ny amboaran’ny ”Can” ity satria misy amin’ireo olona no dibon-kafaliana ka tsy mahafehy tena intsony rehefa mandray zava-pisotro misy alikaola.
Ambanja : sefom-pokontany maty tampoka…
Nentanin-kafaliana tampoka tamin’ny baolina matin’i Ibrahim Amada sady baolina voalohany maty teo amin’ny fihaonan’ny Barean’i Madagasikara sy ny Léopard-n’i RDC ny sefom-pokontany ao Begavo 2, Ambanja. Tao anatin’ny hafaliana tanteraka ity tompon’andraikitra voalohany amin’ny fitantanana ny fokontany ity ka tratran’ny tsy fahasalamana tampoka ary niafara tamin’ny fahafatesany. Nentina haingana teny amin’ny hopitaly izy, saingy tsy avotra intsony ny ainy. Nandritra ny fitsirihana nataon’ny dokotera no nahitana fa fahatapahan’ny lalandra ny nahazo ity sefom-pokontany ity ka nitarika ny fahafatesany. Tsikaritra fa tena nampiray ny Malagasy iray manontolo ny baolina kitra ka niafara tamin’ny fientanam-po diso tafahoatra ho an’ny olona sasany ka tao ireo tapaka lalandra, ankoatra ireo namoy ny ainy. Mila lanjalanjaina tsara ihany ny fientanam-po mba hifankahita indray ny Malagasy rehetra maneran-tany amin’ny lalao ampahefa-dalana ny alakamisy izao. Alao hery àry!